कुन–कुन शीर्षकमा कर छुट ?
आइतबार, मङि्सर १९, २०७८
भारतमा चाैथाे व्यक्तिमा पनि देखियाे ओमिक्राेन
राप्रपाको अध्यक्षमा हारेपछि कमल थापाले भने– निर्मल निवासको नांगो हस्तक्षेपको भत्सर्ना गर्छु
राप्रपा अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङदेन विजयी ,महामन्त्रीमा रेखा थापा पराजित
भारतमा बिजुली बेच्दै कुलमान , मुगुमा भने एक सातादेखि अन्धकार
एमालेलाई जनताको विश्वास हाेइन कुम्भ मेला चाहिएको छ : मन्त्री श्रेष्ठ
लुम्बिनीमा मुस्लिम समुदायकी कान्छी उम्मेदवार
भद्रगोल सिंहदरबारका १० अनौठा दृश्य : मन्त्रालय अगाडि फोहोरको डंगुर
कक्षा १२ उत्तीर्ण भइन् करिश्मा मानन्धर , कति आयो उनको जीपीए ?
आइतबार, जेठ १६, २०७८ मा प्रकाशित
गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । आव २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७७/०७८ मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई यस्तो छूट दिने घोषणा गरेका हुन् । चालू आवमा भने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको थियो ।
आगामी आवमा करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको छ ।
सरकारले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छूटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा रू.२० लाखबाट रू. ३० लाख पु¥याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रू. ५० लाखबाट रू. १ करोड पु¥याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
यो समाचार अभियान दैनिकमा छ ।
आईपीओ परेकालाई शेयर अभौतिकीकरण गर्न सामलिङ्ग पावरको अनुरोध , यस्तो छ तरिका।